Jamboard: Fampisehoana 4K miasa miaraka amin'ny Google Apps | Martech Zone
Jamboard: Fampisehoana 4K miasa miaraka amin'ny Google Apps
Alakamisy, Desambra 7, 2017 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Douglas Karr
Tsy dia matetika loatra aho no manoratra momba ny fitaovana, fa ny taona lasa niara-niasa tamin'ny Dell Luminaries Podcast dia nanokatra ny masoko tokoa ny fiantraikan'ny fitaovana misy eo amin'ny famokarana, ny fahombiazany ary ny fanavaozana. Raha matetika miditra sy mivoaka rindrambaiko isan'andro isika - ny fitaovana ao anaty rahona sy eo amin'ny latabatra dia manova ny fikambananay ihany koa.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny mpiasa lavitra, lasa ilaina ny fiaraha-miasa lavitra - ary G Suite dia mamaly amin'ny jamboard. Jamboard dia fampisehoana 4k ahafahan'ny ekipa manoritsoritra ny heviny, mandatsaka sary, manampy naoty ary misintona zavatra avy hatrany amin'ny tranokala rehefa miara-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa ianao na avy aiza na avy aiza. Ny tena tsara indrindra, ny herinao lavitra dia afaka mampiasa Jamboards marobe na amin'ny app Jamboard amin'ny telefaona na takelaka (Android or iOS).
Ilay Jamboard fanompoana mamela G Suite admin hitantana ny fitaovan'ny Jamboard azy ireo, ary ahafahan'ny mpisera G Suite hifampiresaka amin'ny atiny jam amin'ny azy ireo telefaonina, takelaka, na amin'ny Malagasy. Amin'ny herinandro ho avy, ny serivisy Jamboard dia ho lasa serivisy G Suite fototra.
Tena nieritreritra ny zava-drehetra i Google, avy amin'ny fakan-tsary fakan-tsary malalaka, mikrô maro, mamela teboka 16 mifanindran-dàlana, sora-tanana ary fanekena endrika, ary misy koa ny stilazy sy ny famafana passive izay tsy mila pairing.
Ny Jamboard dia manomboka amin'ny $ 4,999 USD (misy fampisehoana Jamboard 1, stylus 2, famafana 1, ary rindrina 1 rindrina) miampy fandoavam-bola mitentina $ 600 isan-taona sy fanampiana.
Zahao Jamboard Sintomy ny Jamboard Specs
Tags: 4kfampisehoana fiaraha-miasaG SuiteGoogleiOSjamboardfinday fampiharanatakelaka
Singa lehibe 6 amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing amin'ny SMS mahomby